Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubada cagta oo sida ugu fiican loo yaqaan Nickname; 'Auba'. Sheekada Aubameyang ee Caruurnimada iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Kaga bilow.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Nolosha Carruurnimada Hore
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang wuxuu ku dhashay magaalada Laval ee dalka Faransiiska ee 18th June June 1989 oo uu dhalay aabihii Gabonese, Pierre François Aubameyang "Yaya", oo ah difaac hore ee Gabonese iyo hooyadiis Isbaanish, Margarita Crespo Aubameyang, haweeney.
Aubameyang waa qayb ka mid ah xayawaanka oo la wadaagaya dhalashada Faransiiska iyo Gabon. Shaki la'aan, aragtidiisa isku dhafan ayaa si muuqata u muuqda maqaarka saytuunka ah. Adigu marnaba noloshiisa caruurnimadiisa wuxuu ku qaatay Faransiiska iyo Gabon inta koraysa. Waxaa lagu sara mariyay Milan, Italy, halkaas oo aabihiis uu u shaqeynayay sida AC Milan.
Pierre-Emerick Aubameyang hubaal wuxuu ahaa ilmo hanti ah. Waxa uu ku riyaaqay waayo-aragnimo carruureed, oo mid ka mid ah da'diisa uu ka soo shaqeeyay. Inuu haysto aabihii kubada cagta ee kubada cagta ee udhaxeeya kubada cagta waa mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn caalamka.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Nolosha Qoyska
Aabihiis (sawirka hoose) wuxuu mas'uul ka ahaa horumarinta iyo qiimeynta awooda kubada cagta ee Auba. Isaga oo ah naadi weyn oo AC Milan ah iyo ninkii uu saameyn ku yeeshay xiriirka qoto dheer ee kubadda cagta, isaga oo xitaa wiilkiisa 3 kula shaqeynayay hubaal, ma ahayn wax adag.
Pierre-Emerick Aubameyang iyo Waalidiinta - Nolosha Qoyska
Waxaa mudan in la xuso in Mr Pierre François Aubameyang oo sidoo kale loo yaqaan "Yaya" uu ka mid ahaa daafacyadii ugu fiicnaa Afrika intii uu ku sugnaa 1982 ilaa 2002. Waxa uu udub dhexaad u ahaa xulkii Gaboon ee xulka qaranka ee 1994 iyo 1996 African Cup of Nations waxaana u ciyaaray kooxo badan oo Faransiis ah. Riyadiisu waxay mar walba noqotaa inay kor u qaaddo wiilasha sii wadi doona dhaxalka Aubameyang.
Sida aabbaha oo kale sida wiil- The Aubameyangs Aubameyang hooyadeed- Margarita
Isaga oo hooyo, Mrs Margarita Crespo Aubameyang Dhinaca kale marwalba waa ay taageersan tahay go'aanka ninkeeda si uu wiilkiisa ugu dhajiyo dhinaca taariikhda. Waa haween Faransiis ah oo asal ahaan ka soo jeeda Isbaanish.
Waxa ay ku habboon tahay in la ogaado in dhiigga Spanishka uu sidoo kale ku duulayo xididdada Auba. Magaaladii hooyadiis ee El Barraco (oo ku taalla galbeedka Madrid) waxay soo saartay dhowr ciyaaryahan oo xusuus mudo sanado ah.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Isagu waa ninka qoyska
Ka soo baxa kubada cagta, 'Auba', ayaa lagu magacaabaa nin dhamaystiran oo qoyska ah oo jecel inuu waqti la qaato saaxiibkiisa Alysha iyo wiilkiisa, Curtys kaas oo uu u sharaxay ninkeeda Spiderman iyo dabaaldega Batman.
Sida laga soo xigtay Auba "Jacaylku waa wax qurux badan dhammaan noocyada kala duwan, laakiin waxaa laga yaabaa in uu yahay midka ugu weyn ee isbarbardhigga ah ee jacaylku uu dareemayo Alysha iyo Curtys"
"Waxa uu i siiyay xayeysiin dhab ah" ayaa sheegay in aabihii aadka loo jecel yahay, oo kabaha uu mararka badiyaa ku dhejiyo magaca wiilkiisa "Curtys".
Erayadiisa, "Kaliya superhero ee guriga waa wiilkayga Curtys iyo waxaan labaduba daawano Batman iyo Spiderman TV waqti ka waqti"
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Brother Football
Waxa uu leeyahay laba walaalo oo waaweyn oo ah kubbado xirfad leh. Xaqiiqdii, seddexdii seddexaadba waxay ku bilaabeen xirfadahooda AC Milan.
Waxa aanad ka warqabin walaalaha Aubameyang
Inkastoo Pierre-Emerick uu ku soo barbaaray, haddana kuwa kale ayaa weli ku mashquulsan inay helaan aqoonsi caalami ah. Walaalkiisa weyn ee Catilina sidoo kale waa xiddiga Gabon, kaasoo sameeyey muuqaal farabadan oo ah bartamaha 2000s, halka Willy uu yahay xiddig caalami ah, lakiin haatan wuxuu ka ciyaaraa horyaalka Jarmalka.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Wiilka aabaha
Si ka duwan sida walaalihiis, Auba waa jaceylkiisa uu jecelyahay. Isaga oo kaliya ma ixtiraamo laakiin wuxuu raacaa taladiisa ku saabsan ganacsiga iyo arrimaha qoyska.
Marka laga hadlayo ganacsiga, Go'aannada Kubadda Cagta ee ku saabsan Wadaxaajoodka iyo xulashada Naadiyada ayaa ah aabahiisa ugu sarreeya. Adiga, go'aamada hadda la gaaray waa kuwo guulaystay. Tusaale ahaan, waxaa jiray waqtigii St Etienne uu rabay inuu iibiyo Auba Newcastle. Aabihii ayaa diiday inuu wiilkiisa u ogolaado inuu ku biiro Dortmund. Sida laga soo xigtay Auba, "Waxaan ku guuleysanay Champions League sababtoo ah aabahay ayaa wax ka bartay Jurgen Klopp kulankii Borussia Dortmund, inkastoo lacagta ay ka hooseeysay."
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Heerka Xawaaraha
Ficilku waa waxa ugu cadcad ee aad la xiriiri kartaan Pierre-Emerick Aubameyang. Waa xoogga weyn ee uu leeyahay. Waxa uu si dhakhso ah u dhaqsahaa waqti gaaban oo dhaadheer ah, isla markaana wuxuu kubada u qaadi karaa isla waqti isku mid ah. Waxa lagu soo taagay mitirada 30 ee sanadaha 3.7. Tani waxaa la sheegay in ay ka dhakhso badan tahay tartanka orodka adduunka ee 100 iyo heysta rikoodhka adduunka ee Usain Bolt.
Inkasta oo, waxaa lagu muransanaa tartanka 100 by sprain jarmal Julian Reus laakiin weli lama aqbalin tartanka.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Hawlaha Hore
2007, waxaa loo diyaariyey AC Milan akadeemiyadda uu aabaheed, sannadkaan kooxda reer Talyaani waxay noqotay kooxda heysata Champions League. Wuxuu marnaba u ciyaarin kulan Rossoneri, waxaana uu ku guuldareystay inuu u ciyaaro ciyaaryahan ahaan. Taa bedelkeeda, waxaa loo qoondeeyay inuu amaah ugu tago kooxo Faransiis ah sida Dijon, Lille iyo Monaco. 2011, waxa uu saxiixay heshiis joogto ah oo uu ku saxiixay Saint Etienne halkaas oo uu dhaliyey goolal xNUMX, waxaana loo magacaabay ciyaaryahanka sannadka ee Ligue 31 African Player ee 1.
Waxa uu lahaa kulamo isbadal ah oo lala yeeshay tababaraha Saint-Etienne Christophe Galtier. Sida laga soo xigtay tababaraha Faransiiska,
"Inkastoo aysan wax walba si wanaagsan ugu soconin Auba marka hore. Kaliya waxaan arkay hal shay. Taasi waa xawaare. Waxaan arkay intii lagu jiray tababarka inuu ahaa ciyaaryahanka ugu dhaqsaha badan ee aan abid helay. "
Markii uu da'diisu ahayd 20, Pierre wuxuu u ciyaaray kooxda Faransiiska U-21 ka hor markii hore loogu yeeray kooxda U-19 Talyaaniga. Waxa uu u wareegay Borussia Dortmond ee 2013, waxaana uu ka mid noqday weeraryahanada ugu sareeya horyaalka Bundesliga. Halyaygii hore ee kooxda BVB ayaa ku biiray heshiiska 13 million.
Inkastoo Pierre uu ku dhashay Faransiiska islamarkaana uu u ciyaari doono Gabon kabtanka kooxda si uu u sii wado kubada cagta Aubameyang oo uu walaalkiis Catalina sameeyay. Waxa uu ku faraxsan yahay oo sharaf u ah inuu ogaado carruurtiisu waxay doonayaan inay ku daydaan.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Samaynta Taariikhda
Aubameyang waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Gaboon ee ka ciyaara Bundesliga ama horyaalka Jarmalka kale. Waxa uu kulankiisii ​​ugu horeeyay u saftay August 10, 2013 ka dib markii uu ku biiray Dortmund bishii July ee isla sannadkan. Waxa uu kulankiisii ​​ugu horeeyay ku riyooday isagoo dhaliyay seddexleey uu dhaliyay seddexleydiisii ​​ugu horeysay, taasoo la ciyaartay FC Augsburg.
Sidoo kale buugaagta taariikhda, Bishii July ee 2012, Aubameyang wuxuu u tagay London si uu u matalo Gabon ciyaaraha Olombikada. Kulankii ugu horeeyay ee uu ka horyimid Switzerland wuxuu dhaliyay goolka kaliya ee ciyaarta, taasoo noqon doonta goolkii kaliyaha ee Gabon uu gool dhalin lahaa. Tani waxa ay aheyd goolkii ugu horeeyay ee abid dhaliya ee Gabon lagu ciyaaro Olimbikada. Isagoo dhaliyay goolasha 19, Pierre-Emerick Aubameyang waa goolkii ugu sareeyay ee gool dhalinta ee Gabon waqtigeeda oo dhan.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Baabuurta
Iyadoo la tixgelinayo xawaaraha xiddiga caalamiga ah ee Gabon, waxa kaliya ee dabiici ah in uu ku raaxeysto noloshiisa xawaare aad u dheer.
Aubameyang ee Jacaylka loogu talagalay gawaarida caadiga ah
"Waa wax xiiso leh baabuur sidan oo kale ah," ayuu sheegay in uu Lamborghini Aventador dhejiyey. Nambarka kooxda Aubameyang ayaa xitaa laga heli karaa taayirada baabuurka, inkastoo uu hadda wadday Lambarghini.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Wonder Boots
Waxaa badanaa loo yaqaan Mr Glamorous. Aubameyang maahan ciyaaryahanada celcelis ahaan adigoo adeegsanaya fekerka, gaar ahaan marka ay timaado dharka.
Pierre-Emerick Aubameyang kabaha caadiga ah
Bishii Diseembar 2012, wuxuu xirxiray kabaha ugu weyn ee loo yaqaan '4,000 Swarovski's Crystals' iyo naqshad ay ku jiraan magaciisa, lambarkiisa iyo naadiyadiisa iyo xayawaanka markii ay kululaanayaan kulankooda Olympique Lyonnais.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Wuxuu u maleynayaa inuu yahay SPIDERMAN
Aubameyang waxay leedahay waayo-aragnimo hore marka ay timaado xafladaha superhero. Tani waxay ku caan baxday Spiderman waxaa loo waxyooday wiilkiisa Curtys kuwaas oo inta badan fadhiistay saldhigyada si ay u daawadaan kubada cagta kubada cagta. Aubameyang ayaa mar uu soo bandhigay dabbaaldegga superhero ee wiilkiisa ka dib markii uu u dhaliyey goolkii Borussia Dortmund ee 2014 Supercup kooxda Bayern.
Wiilkiisa waa taageere weyn oo geesiyaal buugta jilicsan oo jecel inuu u muuqdo maaskarada Spiderman sida aabihiis.
Auba 's Spiderman Goal Celebrations
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Wuxuu u maleynayaa inuu yahay BATMAN
Marka uusan ka heli karin qalabka Spiderman, wuxuu u jeestay Batman.
Batroolka Auba ee Batman
Auba waa fanaan weyn oo Batman ah. Marwalba waa ninka nafta jilicsan ee jimicsi kasta oo ku xiranaya dharka batman ee wiilkiisa. Tani waxay ka dhigtaa kuwo badan oo qosol leh isaga jaceeylka iyada oo la yiraahdo Dark Knight.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Lagu dhameeyay xirashada maaskarada inta lagu jiro dabaaldega
Auba marna la ganaaxay markii la dhigay maaskaro loo yaqaan 'Nike-supplied mask' intii lagu jiray dabaaldeg.
Munaasabadda Xuska Munaasabada Auba
Ganaaxa ayaa la sheegay in uu kudhow yahay € 50,000. Waxaa markii dambe la xaqiijiyay in maaskarada loo qoondeeyay Nike Hypervenom Phantom "Night Strike" kabaha uu xiran yahay.
Madaxa guud ee Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaa u sheegay majalada Kicker: 'Ma noqon karto in Nike uu isku deyayay inuu kiciyo xiisaha dhaqaale ee sidan ah.'
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Jacaylka Afrika
Auba 's tatoo African wuxuu qurxiyaa jirkiisa wuxuuna kor u qaadaa naftiisa isagoo jacayl u qabo qaaradda.
Haa waa Afrika, ma aha sababtoo ah wuxuu ku dhashay Afrika, laakiin maxaa yeelay Afrika wuxuu ku dhashay isaga.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Wuxuu jecelyahay kubada cagta
Haa wuu xirxiraa kabaha Crystal, Maskaxda Spiderman, Batman Capes - marka hore la eego. Shaki la'aan, Auba waa nooc caan ah oo caan ah.
Marka la eego kormeerka dhow, waxaad arki doontaa in qofka weerarka geystay uusan ahayn kii aad u malaynayso inuu ka baxsan yahay garoonka dhexdiisa. Sida laga soo xigtay saaxiibkiisa dhow Christophe Jallet,
"Aubameyang waa ilmo dagan, oo aan booqan naadiyada habeenkii, ma cabo aalkolada iyo had iyo jeer riyooyin ku saabsan kubada cagta".
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Midabka Timaha
Auba aad ayuu uga walaacsan yahay timaha. Waxa uu ka mid yahay ciyaartoy dhowr ah oo jabiyay dhulkii Paul Pogba. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa Paul Pogba ku soo qoray ogeysiiskiisa - ma ahan garoonka dhexdiisa, lakiin waxa uu ciyaaray timihiisa.
Milkiilaha Timaha Ugu Fiican Kubadda Cagta
Wuxuu leeyahay timaha ugu quruxda badan kubada cagta.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Master Master
Miroslav Klose wuxuu u isticmaali jiray inay sameeyaan, hadda Aubameyang ayaa sidoo kale sameeyay. Meelaha uu ku dhaco. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa u sheegay Sport Bild wuxuu ogyahay in xafladihiisa qaaska ah ay yihiin "Aan wax dhib lahayn" ka dib markii lagu amray in ay joojiyaan kubada cagta ee Gabon iyo khubaro caafimaad.
Auba - Master Master
Xaqiiqdii, Auba ayaa go'aanka iska leh go'aan ka gaaritaan kasta ha noqotee ama ha iska tuurin, laakiin waxay u egtahay inay sidaas sameeyaan ka dib markii ay si gaar ah u dheceen.
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Xushmee for Crespo
Dhibaato kuma jirto ciyaaryahan kasta oo kubada cagta ku ciyaaray magaciisa. Auba waa ka reebban tan.
Auba waa Tatoo ee Crespo
Aubameyang ee geesiga Carruurnimada: Hernan Crespo
Waxa uu qabanayaa sanamkiisa, waa weeraryahanka reer Argentina Hernan Crespo on uu bidixda bidix. Warbixinnadu waxay muujinayaan in Hernan Crespo wuxuu la xiriiraa hooyadiis oo magaceeda ku dhejisa. Aubameyang waa fanaan la isku qoondeeyay oo ah Hernan Crespo waxaana loo magacaabaa isaga oo ah qaab ciyaareedkiisa ugu weyn ee ciyaarta.
Sida laga soo xigtay Auba, "Crespo waa firfircooni, xoog ku ah hawada, farsamo ahaan iyo hibo leh ciyaaryahan," ayuu u sheegay kicker. Auba ayaa inta badan ku bixiya casharrada tababarka kadib kormeeridda xirfadaha ugaadhsiga ee jerisga.
Sida laga soo xigtay Auba, "Crespo waa sharraxaad jidka loo yaqaan 'Poacher'. Marar dhif ah ayuu ku lug yeeshaa dhismaha, mana muujin doonin wax badan oo daneynaya in uu ka danbeeyo khadadka difaaca. Waxa uu sameeyaa dhaqdhaqaaq aan aad u yareyn marka uu banaanka ka baxo. Laakiin sanduuqa gudihiisa, wuu ogyahay sida loo guuro. Wuxuu ogyahay meesha kubadaha labaad ay ku dhamaanayaan. Wuxuu ogyahay sida loo isticmaalo qadarka ugu yar ee booska ka haray sanduuqa 6. Waxan baranayaa maalin kasta si aan u noqdo. "
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin -Lifebogger Rankings
Waxaanu u hoggansannay tirakoobyadii caanka ahaa ee Pierre-Emmerick Aubameyang.
Naby Keita Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Rigobert Song Song Story Story Plus Xaqiiqooyinka Raadinta
Maxamed Elneny Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
George Weah Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Riyaaliga Mahrez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Kevin-Prince Boateng Sheeko-dheer-Sheeko Xogta Warka Xogta
Thomas Partey Sheeko Xeeldheer Xogta Waalidka